अमेरिकाले गुफामा तेल भण्डारणको रहस्य | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
अमेरिकाले गुफामा तेल भण्डारणको रहस्य
असोज १, काठमाडौं । साउदी अरेबियाका प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका हमलापछि अमेरिकी अधिकारीहरूले आफ्नो देशभित्र आपत्‌कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न भनि भण्डार गरिएका विशाल तेलको सञ्चितिलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उक्त तेललाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले उल्लेख गरेको तेलको परिमाण ६४ करोड ब्यारेल छ र त्यो टेक्सस र लुइजियाना राज्यको मुन्तिर अवस्थित नुनिला विशाल गुफाहरूमा भण्डारण गरिएको छ।
यी रणनीतिक भण्डारहरूमा इन्धन राख्ने अवधारणा सन् १९७० को दशकमा आएको हो।
यो किन स्थापना गरियो ?
अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले यस्तो तेलको भण्डार स्थापना गर्ने अवधारणा सन् १९७० को प्रारम्भमा ल्याए।
मध्यपूर्वका देशहरूले तेल आपूर्ति बन्द गरेपछि विश्वभर मूल्य आकाशिएको परिवेशमा अमेरिकाले तेल भण्डार गर्ने योजना बनाएको थियो।
रिजर्भ भनेको के हो ?
यो जमिनमाथि ट्याङ्की बनाएर तेल भण्डार गर्नुभन्दा सस्तो र सुरक्षित रहेको ठानिन्छ।
नूनको मिश्रण र भौगर्भिक चापका कारण भूमिगत रूपमा भण्डारण गरिएका तेल चुहावट हुने सम्भावना रहँदैन।
फ्रिपोर्ट नजिकैको सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डारमा २५ करोड ४० लाख ब्यारेल तेल अटाउन सक्ने क्षमता छ।
रिर्जभको वेबसाइटका अनुसार यी गुफाहरूमा १३ सेप्टेम्बरमा ६४ करोड ४८ लाख ब्यारेल तेल सञ्चित गरिएका थिए।
भौतिक कठिनाइको अर्थ प्रत्येक दिन यी गुफाबाट सानो परिमाणमा मात्रै तेल बाहिर ल्याउन मिल्छ।
यसको अर्थ राष्ट्रपतिले आदेश दिए पनि त्यसलाई बजारसम्म आइपुग्न करिव दुई हप्ता लाग्छ।
भण्डारण गरिएको कच्चा तेल हो। यसलाई थप प्रशोधन गरेपछि मात्रै कार, जहाज र विमानहरूमा प्रयोग गर्न मिल्छ।
यसको प्रयोग कतिको गरिएको छ ?
अन्तिम पटक अरब स्प्रिङ भनिने अरब देशहरूमा सन् २०११ मा भएको क्रान्तिका समयमा यो रिजर्भको प्रयोग गरिएको थियो।
त्यसबेला इन्धन आपूर्तिमा समस्या कम होस् भन्नका लागि आइइएका सदस्य देशहरूले संयुक्त रूपमा छ करोड ब्यारेल तेलको प्रयोग गरेका थिए।
उनका छोरा जर्ज डब्लु बुसले क्याट्रिना नामक शक्तिशाली आँधीपछि १ करोड १० लाख ब्यारेल प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए।
अमेरिकामा नै इन्धनको उत्पादनको क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा त्यत्रो विशाल भण्डारको उपयोगिताबारे पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। वासिङ्टनमा कतिपयले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउने निकायको एउटा प्रतिवेदनले सन् २०१४ मा त्यस्तो सुझाव दिदैँ त्यसबाट अमेरिकी उपभोक्ताका लागि तेलको मूल्य घट्नसक्ने सुझाव दिएको थियो।
समाचारअमेरिकाले गुफामा तेल भण्डारणको रहस्य